Membership FAQs | children-museum-wilm
Into Omawuyazi Phambi Kotyelelo Lwakho
Iiyure kunye nokwamkelwa
Izalathiso kunye nokuPaka
Bhalisela incwadana yethu
Amaqela oMhla wokuzalwa
Thatha i-CMoW ekhaya!
Iinkampu ze-CMoW zowama-2021
Iimermaids kunye neKampu yamaPirates
Inkampu Yeencwadi zamabali
Ukungcamla kweNkampu yeHlabathi
Umculo weMania Camp
I-Adventures kwi-Art Camp
Emini yoNyaka oMtsha
2021 Uhlaziyo lobulungu
Dibana neQela lethu
IMIBUZO EBUZWA RHOQO MALUNGA NOBULUNGU
Ndingena njani ukuze ndigcine amatikiti?
Nokuba unobulungu, kufuneka uqale ubhalisele indawo yethu ngaphambi kokuba ukwazi ukungena kwaye ugcine amatikiti apha. Qinisekisa ukuba usebenzisa idilesi ye-imeyile kunye nazo zonke iinkcukacha ozibhalisele ekuqaleni ubulungu bakho, kungenjalo ubulungu bakho abuyi kuqhagamshela. Ukuba ufuna ukuhlaziya okanye uqinisekise iinkcukacha zakho sitsalele umnxeba ngeeyure zethu zokusebenza.
Ndingasifumana njani isaphulelo sam kubulungu?
Ukuba usebenzisa isaphulelo kufuneka uthenge ubulungu bakho ngefowuni okanye ngokobuqu kutyelelo lwakho olulandelayo. Ukuba ufaka isicelo sesaphulelo sabafundisi-ntsapho okanye somkhosi, yiba nesazisi sakho silungile. Ukuba ufaka isicelo sokuthenga itikiti kubulungu, yiba nenombolo yakho yeodolo ilungile.
Ngubani ofumana uBulungu boMhambi owongezelelweyo xa umntu ethenga uBulungu obuGalelayo?
Usapho olufanelekileyo kuluntu lwethu lufumana uBungu beNdwendweli kulo lonke uBulungu obuThathayo obuthengiweyo. Ukucebisa usapho cofa apha.
Ngaba kufuneka ndigcine amatikiti kwi-intanethi ukuba ndinobulungu?
Ukuba unobulungu, ungangena ngosuku oluqhelekileyo ngokugcina amatikiti kwi-intanethi okanye ngokujonga nobulungu bakho kwiDesika ePhambili. Ekuphela kwexesha ofuneka ngalo ngokupheleleyo ukuba ugcine i-intanethi ziintsuku zethu zomsitho! Cofa apha ukujonga yonke imicimbi yethu ekhethekileyo.
Ubulungu buhlala ixesha elingakanani?
Ubulungu ngabunye buhlala kude kube sekupheleni kwenyanga ethengwe kunyaka olandelayo. Umzekelo: Ukuba uthengiwe ngo-06/13 ngo-2021 ihlala kude kube yi-06/30 ngo-2022.
Ngaba ungazama iMyuziyam phambi kokuba uzibophelele kubulungu?
Ewe, ungathenga amatikiti okungeniswa ngokubanzi ukutyelela iMyuziyam kwaye ufake isicelo sokuthenga itikiti kulo naliphi na inqanaba lobulungu kamva!
Ndiwenza njani amatikiti am kubulungu?
Ukuthengwa kwetikiti ngalinye kuza nenombolo yeodolo kunye nenombolo yetikiti. Ukuba ufuna ukwenza iapile isaphulelo okanye amatikiti kubulungu bakho, ungakwenza oko ngefowuni okanye ngokobuqu kutyelelo lwakho olulandelayo kunye nenombolo yakho yeodolo.
Bangaphi abantu abadala kunye nabantwana abanokuba kubulungu?
Ilungu ngalinye lelabantu abadala ababini abanamagama kunye nabo bonke abantwana bekhaya.
Amalungu ayakwazi ukongeza umntu omdala owongezelelweyo nge-$25.
Bonke ubulungu, ngaphandle umntu omdala extra, are engadluliseliyo. Ukuba apha enyakeni umkhathaleli wakho uyatshintsha, ungahlengahlengisa umntu omdala othe chatha kubulungu bakho kwaye unikwe ikhadi elitsha laloo mntu.
Unina wam ufuna ukuza nabantwana bam kwiMyuziyam esebenzisa ubulungu bam. Isebenza njani loo nto?
Ngabantu abadala ababini ababizwa ngokuba kubulungu kuphela abavunyelwa ukuba bangene simahla kwiMyuziyam. IiNannies, oomakhulu nootatomkhulu, okanye amanye amalungu osapho kuya kufuneka ahlawule ukwamkelwa. Nangona kunjalo, ngeedola ezingama-25 unokongeza umntu omdala wesithathu kubulungu bakho ukuba loo mntu ukhulileyo uza kundwendwela rhoqo okanye omnye unokwenza umntwana wakho abe ngomnye waba bantu babizwa ngokuba ngabantu abadala.
Ndingazisa iindwendwe ngobulungu bam?
Zonke iindwendwe zamkelekile. Nangona kunjalo, ukuba ayingomntu omdala ochaziweyo kubulungu bakho kuya kufuneka bahlawule ukwamkelwa.
I-Adventurer kunye noBulungu boMhloli zibandakanya i-4 yasimahla yokusetyenziswa kwexesha elinye lokupasa iindwendwe ukuze kusetyenziswe iindwendwe ezongezelelweyo.
NdinoBulungu beNavigator. Ndingangena ngeempelaveki?
Amalungu eNavigator anikwa isiqingatha sekhefu lokungena kwiMyuziyam ngeempelaveki.
$ 5 AMAQHATHA NGEMPELAVEKI
Nceda uqhagamshelane noMnxibelelanisi wethu woBulungu uJessie ku-jgoodwin@playwilmington ngayo nayiphi na imibuzo eyongezelelweyo, okanye usitsalele umnxeba ku- 910-254-3534
NgoLwesibini-ngoMgqibelo 9 AM - 5 PM
NgeCawa 1 PM - 5 PM
I-CMoW yi-501 (c) (3) engenzi nzuzo umbutho.
© 2021 yiMyuziyam yaBantwana yaseWilmington